Wadada Gawaarida, W Belar Guardrail, Rail Rail - Huiquan
Wadada Gawaarida Wadada
Huiquan Traffic Xarumaha
Waxaa la aasaasay 2006, Shandong Guanxian Huiquan Traffic Facilities Co., Ltd. wuxuu ku yaal Guanxian New Century Industrial Zone, Gobolka Shandong. Shirkadda diiwaangashan ee 20 milyan oo CNY ah, waxay ku fadhidaa aag qiyaastii ah 43,290 mitir murabac ah. Waxaan nahay mid ka mid ah shirkadaha waawayn ee ku takhasusay wax soo saarka, iibinta qashinka kulul ee galvanized guardrail.
Xarumaha Wadooyinka ee Huiquan
Boolal ayaa lagu qeexay ANSI B1.13M dulqaadka Fasalka 6 g. Qalabka Bolt wuxuu u egyahay ASTM ...
U qaabeynta boostada
Boostada ayaa inta badan la raacayaa AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 iyo heerka EN1317. Maaddada ...
C qaabka boostada
W ilaaliyaha ilayska
Gawaarida ayaa badanaa ah in la raaco AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 iyo heerka EN1317. Sariirta ...
H qaabka boostada
Waxyaabaha loogu talagalay taasi badanaa waa Q235B (S235Jr xoogga dhalidda ayaa ka badan 235Mpa) iyo Q345B (S355Jr xoogga dhalidda ayaa ka badan 345Mpa).
FAAHFAAHINTA Faahfaahin HADII LA XIRIIR
Daaweynta dusha sare waa la galgaliyay kulul, si loo raaco AASHTO M232 iyo heerka loo siman yahay sida AASHTO M111, EN1461 iwm. Boostada waxaa lagu dhejiyay sagxadda, si loogu dhejiyo loona taageero taarikada. Waxay hoos u dhigi kartaa xoogga saameynta inta shilku dhacayo.
DAAWO SOO SAARKA
Dhamaadka terminalku wuxuu badanaa raacaa AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 iyo heerka EN1317. Waxyaabaha loogu talagalay taasi badanaa waa Q235B (S235Jr xoogga dhalidda ayaa ka badan 235Mpa) iyo Q345B (S355Jr xoogga dhalidda ayaa ka badan 345Mpa).
Boolal ayaa lagu qeexay ANSI B1.13M dulqaadka Fasalka 6 g. Qalabka Bolt wuxuu u dhigmaa ASTM F568M ee Fasalka 4.6. Waxyaabaha loogu talagalay boodhadhka u adkaysta daxalka waxay u dhigantaa ASTM F 568M ee Fasalka 8.83. handarraabbadeedii Daaweynta dusha sare waa inay raacdaa AASHTO M232.
QAYBTA WARSHADA QARNIGA CUSUB EE GUAN County, LIAOCHENG, SHANDong GOBOL, CHINA